Ubuyele emsebenzini udokotela owahlinza isiguli okungesona | News24
Ubuyele emsebenzini udokotela owahlinza isiguli okungesona
Nairobi – Abasebenzi bezempilo abathintekayo ekuhlinzweni kwesiguli esingafanele esibhedlela saseKenya ngenyanga edlule, sebebuyele emsebenzini.
Isibhedlela iKenyatta National Hospital (KNH) samisa udokotela obesafundela umsebenzi, yi-anaesthetist kanye nabahlengikazi ababili ngokuhlinza ingqondo isiguli okungesona.
Lesi yisona sigameko esishaqisa kakhulu esake senzeka emlandweni walesi sibhedlela.
Ngokombiko wephephandaba iDaily Nation ibhodi lalesi sibhedlela ngoLwesine lithe lidlulisele uphenyo ebhodini iKenya Medical Practitioners and Dentists Board (KMPDB).
"Leli bhodi ngeke lisazibandakanya ekuqondisweni kwezigwegwe kwalabo abathintekayo njengoba uphenyo seludluliselwa ku-KMPDB," kusho uMark Bor, onguSihlalo webhodi le-KNH.
Lokhu kwenzeke ngemuva kokuba uSihlalo weMedical Board uProf George Magoha "ephakamise ukuba babuyele emsebenzini labo abasolwayo kuze kuqedwe uphenyo."
OLUNYE UDABA: BUKA: Udokotela ekhipha ikokoroshe liphila ekhanda lowesifazane
Umbiko uthi mabili amadoda aphuthunyiswe esibhedlela - enye yawo kwakumele ihlinzwe ukuze ikhishwe ihluli legazi ebuchosheni kanti le enye "yayidinga usizo lwezempilo njengoba yayivuvukele ekhanda".
Yilapho-ke okwaba khona isixakaxaka njengoba izigqebhezane ezichaza ngokugula kweziguli zaphambana, kwaholela ekutheni kuhlinzwe indoda okungeyona.
Odokotela babona ukuthi benze iphutha sekuphele amahora ambalwa bewuqalile umsebenzi ngesikhathi sekubacacela ukuthi "akukho hluli ebuchosheni bale ndoda ehlinziwe".
Isibhedlela sakhipha isitatimende sokuxolisa ngalokhu okwenzeka futhi saqinisekisa "ukuphepha nokuhlenga impilo yesiguli esithintekayo" sananela ngokuthi umisiwe emsebenzini udokotela kulesi sigameko.
Kepha ngokusho kombiko weThe Star, ozakwabo balo dokotela babengahambisani nokumiswa kwakhe, njengoba babekhala ngokuthi onesi okuyibo abalungisa isiguli yibo okumele babekwe icala ngokuphambanisa izigqebhezane zazo.